Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo haatan mooshin ka diyaarinaya arrin xasaasi ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo haatan mooshin ka diyaarinaya arrin xasaasi ah
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la sheegaya inay haatan diyaarinayaan mooshin ka dhan ah saldhigga ay dowladda Imaaraadka Carabta ku doonayso inay uga sameeysato garoonka diyaaradaha magaalo xeebeedka Berbera ee maamulka Somaliland.
Mooshinkaan oo ah kii ugu horeeyay oo ay xildhibaanadaasi diyaariyaan ayaa kulankoodii ugu danbeeyay kusoo jeediyay in laga hadlo arrinta muranka badan dhaliyay ee ka taagan saldhig Imaaradku doonayo inuu ku yeesho garoonka diyaaradaha ee ku yaalla magaala Berbera ee maamulka Somaliland.
Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa codsiga xildhibaanadaasi mooshinka soo jeediyay ka diiday, maadaama aanay qodobkaasi ku jirin ajendayaasha ay kulankoodii uga hadlayeen, balse lagu wargeliyay inay mooshin soo gudbin karaan.
In ka badan 30 xildhibaan ayaa la sheegayaa inay yihiin tirada xildhibaan ee mooshinka haatan diyaarinaya, waxaana lagu wadaa inay tiradaasi gaarto illaa 50 xildhibaan oo mooshinka maanta u gudbin doonna guddoonka baarlamaanka Soomaaliya.
Xiriirka diblomaasiyeed ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa muddooyinkii ugu dambeysay noqonayay mid sii xumaanaya, tan iyo markii ay soo shaac baxday in Imaaraadku uu Somaliland heshiis kula galay inuu saldhig militeri uu ka sameeysanayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera.
Dhinaca kale, mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Imaaraaadku Carabta ayaa beeniyay in xiriirka iyaga iyo Soomaaliya uu xumaaday, waxayna mas’uuliyiintaasi sheegeen in safiirkooda arrimo shaqsiyadeed uu uga dhoofay magaaada Muqdisho, balse aanay dowladda Imaaraadka u yeerin.
Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanada baarlmaanka maamulka Somaliland ayaa dhawaan ansixiyay in Imaaraadka Carabta saldhiga militeri ka sameysan karaan garoonka diyaaradaha magaalada Berbera, waxaana haatan meel gabo-gabo ah maraya dhismaha saldhigaas.